Back 15, Friday - June 2018
၂၀၁၈ ခုနှစ် ဓမ္မာစရိယစာမေးပွဲ အောင်စာရင်းအား အများပြည်သူသိရှိနိုင်စေရန် အသိပေးဖော်ပြခြင်း
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ သာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန၊ သာသနာရေးဦးစီးဌာနက ကျင်းပပြီးစီးခဲ့သော ၁၃၇၉(၂၀၁၈) ခုနှစ်အတွက် ဓမ္မာစရိယစာမေးပွဲတွင် သံဃာတော်များ၊ သာသနာ့နွယ်ဝင် သီလရှင်များနှင် လူပုဂ္ဂိုလ်များ ဝင်ရောက်ဖြေဆိုကြရာ ဓမ္မာစရိယသုံးကျမ်း ၉၃၇ ပါး၊နှစ်ကျမ်း ၉၄၄ ပါး၊ တစ်ကျမ်း ၁၀၄၅ ပါး၊ ပါဠိဂုဏ်ထူး ၁ ပါး၊ မြန်မာဂုဏ်ထူး ၅ ပါး အောင်မြင် ခဲ့ပါသည်။
စုစုပေါင်း ဖြေဆိုသူ ၂၂၇၆၆ ပါးအနက် အောင်မြင်သူ ၂၉၃၂ ပါးဖြစ်၍ ၁၂.၈၈ ရာခိုင်နှုန်း အောင်မြင်ကြပါသည်။
၁၃၇၉(၂၀၁၈)ခုနှစ် ဓမ္မာစရိယစာမေးပွဲတွင် သုံးကျမ်းပြီး အောင်မြင်ကြသော သံဃာတော်များနှင့်သာသနာ့နွယ်ဝင် သီလရှင်များအနက် ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယနှင့် သီလရှင် ပထမ ရရှိခဲ့ကြသော အထူးအောင်ပုဂ္ဂိုလ်များမှာ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖြစ်ကြပါသည်-
တိပိဋကထိန်လင်းကျောင်းတိုက်၊ အောင်မြေသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
မဟာဝိသုဒ္ဓါရုံရွှေကျင်တိုက်သစ်၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ဓမ္မာရုံသီလရှင်စာသင်တိုက်၊ တောင်ငူမြို့နယ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး
၁၃၇၉(၂၀၁၈)ခုနှစ် ဓမ္မာစရိယစာမေးပွဲအောင်စာရင်းများကို နေပြည်တော်/ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်သံဃနာယကအဖွဲ့ရုံးများတွင်လည်းကောင်း၊ နေပြည်တော်/ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်သာသနာရေးမှူး ရုံးများတွင်လည်းကောင်း သက်ဆိုင်ရာစာဖြေဌာနများရှိ မြို့နယ်သံဃနာယကအဖွဲ့ရုံးများနှင့် မြို့နယ် သာသနာရေးမှူးရုံးများတွင်လည်းကောင်း ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
၁၃၇၉(၂၀၁၈)ခုနှစ် ဓမ္မာစရိယစာမေးပွဲအောင်စာရင်းများကိုနိုင်ငံတော်သံဃမဟာနယကအဖွဲ့ Website www. mahana.org.mm၊ သာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနWebsite www. mora. gov.mmနှင့် သာသနာရေးဦးစီးဌာန Website www.dra.gov.mmတို့တွင်လည်း ဝင်ရောက် ကြည့်ရှုနိုင်ပါကြောင်း အများပြည်သူသိရှိနိုင်စေရန် အသိပေးဖော်ပြအပ်ပါသည်။
၂၀၁၈ ခုနှစ် ဓမ္မာစရိယစာမေးပွဲ အောင်စာရင်းများအား PDF File ဖြင့် ဖော်ပြအပ်ပါသည်။